Madaxweyne Farmaajo oo galabta dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Madaxweyne Farmaajo oo galabta dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho
Madaxweyne Farmaajo oo galabta dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho
Muqdisho (Halqaran.com) – Madaxaweynaha JF Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdigii kala qaybgalay Shirka Dadweynaha iyo Horumarinta ee Nairobi ayaa Jimcihii galabta dib ugu soo laabtay Magaalada Muqdisho.
Madaxweyne Farmaajo ayaa inta uu ku sugnaa Xarunta Wadanka Kenya waxaa uu kulan doceedyo la yeeshay qaar ka mid ah Madaxda iyo hoggaamiyeyaasha ka soo qaybgalay shirkan.
Madaxweynaha Soomaaliya oo Khamiistii Magaalada Nairobi kula kulmay Madaxweynaha Kenya, Uhuru Kenyatta ayaa waxaa ay ku kala saxiixdeen heshiis dhawr qodob ka kooban, oo dib loogu soo celinayo xiriirkii diblomaasiyadeed ee labada dal.
Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad, ayaa sheegay in labada Madaxweyne ay ku heshiiyeen in la soo celiyo xiriirkii diblomaasiyadeed ee labada dal, in la la soo celiyo duulimaadyadii tooska ahaa ee Muqdisho iyo Nairobi, meeshana laga saaray duulimaadyadii mari jiray Degmada Wajeer ee Gobolka Waqooyi Bari Kenya iyo in dadka Soomaaliyeed ee Visaha dal ku galka Kenya ka qaataan Garoonka Nairobi.
Mr. Cawad ayaa caddeeyay in labada Madaxweyne ay isu waafaqayn in arrinta ku aadan murunka badda looga dambeeyo Maxkamadda Cadaaladda Adduunka (ICJ), oo horey loogu wakiishay inay ka gar-noqdo.
heshiiska Kenya iyo Soomaaliya
Madaxweyne Farmaajo dalka dib ugu soo laabtay